Codeyn loo sameeyey “Nuuca Nidaam Fulineed ee Dalka” oo soo dhamaatay – Kalfadhi
Codeyn loo sameeyey “Nuuca Nidaam Fulineed ee Dalka” oo soo dhamaatay
Guddiga Dib-u-eegista iyo Lasocodka Hirgelinta Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyey codeyn uu Bartiisa Feysbuugga ugu qabtay shacabka Soomaaliyeed. Codeyntaas ayey dadku ku kala dooranayeen nuuca nidaam fulineed ee ay dooni lahaayeen, waxaana la siiyey 2 iqtiyar oo kala ah: 1) Madaxweyne iyo Reysal Wasaare iyo 2) Madaxweyne iyo Madaxweyne Kuxigeen.
Dadkii codeeyey, oo gaarayey 5000 (shan kun), ayaa 54% waxay u codeeyeen iqtiyaarka 1-aad oo ah inuu dalku yeesho nidaam fulineed oo ah Madaxweyne iyo Reysal Wasaare, halka 46% ay u codeeyeen inuu dalku yeesho Madaxweyne iyo Madaxweyne Kuxigeen.
Codeyntan waxay socotay hal todobaad, lamana oga oo ma aysan caddeyn Guddigu waxa ay ku doonayaan, hase ahaatee waxa uu Guddigu bilihii ugu dambeeyey si dardar leh u waday dib-u-eegista dastuurka oo ay isaga, Guddiga Madaxa-banaan ee Dastuurka iyo Wasaaradda Dastuurka sheegeen iney doonayaan iney qabyo-tiraan sanadkan.
Cutubyada laga shaqeynayo hadda waa cutubyada 11-aad ilaa 15-aad, waana cutubyada ugu adag oo la xiriira siyaasadda iyo kheyraadka dalka. Hase ahaatee, waxa uu Guddigu hadda ka shaqeynayaa cutubyada 6-aad ilaa 9-aad, oo ah 4 cutub, kuwaas oo ay horay uga shaqeeyeen, uuna Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanku u gudbiyey Guddiga Madaxa-banaan ee Dastuurka, hase ahaatee dib ugu soo noqday.
Inuu dalku yeesho hogaan la soo doortay, oo haddii qaarkii la magacaabayo ama lasoo wada dooranayo uu dastuurka hawshooda kala caddeynayo, waa arrinta kaliya ee ay dad badan u arkaan inuu yahay qeyb ka mid ah xalka dalka. Inkasta oo aysan Madaxweynaha iyo Reysal Wasaaraha hadda wali iskhilaafin, haddana waxaa kuwii ka horeeyey dhex mari jiray khilaaf uu inta badan ku bixi jiray Reysal Wasaaraha, waxaana la sheegaa inuu sababta leeyahay sida uu dastuurku u dhigo awoodahooda.
Reysal Wasaare Kheyre oo hubiyey inuu 2 sano joogay “Xafiiska Xukunka Soomaaliya”
Maamulka dowladda hoose ee Garowe oo mamnuucay boosaska laga dhex samaysto togaga iyo biyo-mareenada